NL (ခ) ဒီအမောင်: 02/23/12
စစ်တပ်ကို စိတ်နဲ့တောင် မပစ်မှားနဲ့တဲ့ (ပြဇာတ်)
တိန်ဗျောင် ... တိန်းဗျောင်း ... တိန်းဗျောင်း .... ဒိန်တိန်တိန် ဒိန်တိန်တိန်
ဇာတ်မင်းသားကိုတေဇ ။ ။ မင်္ဂလာရှိတဲ့ မေရီခရစ်စမတ်အကြို ဘားအံမြို့ရဲ့ ညချမ်းအချိန်ခါ သာမယမှာ သားလေတေတေ .... အခုလိုကပြ အသုံးတော်ခံခွင့်ရတာ အထူးပဲ ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ ချစ်စွာသော ပရိသတ်အပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှပါး ရွှင်လန်းကြပါစေ... လို့ ... အဝေရာဟောတု မေတ္တာပြုလိုက်ပါတယ် ...။
(ပွဲခွင် ပြောင်းသွားပါပြီ ဇာတ်ဆရာ ပွဲသွင်းကောင်းလို့ ဘားအံကို ရောက်သွားပါလေရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ)
ရွာစားကျော်စိန် ပတ်ရှည်ကလဲ အင်ထရို စပါလေရော (ဒန်းဒန်းဒန်းဒန်း ..)
မင်းသားတေဇ ။ ။ " အဖြူရောင်မမ သိပ်လှနေတော့ ဒီကမင်းသား ချစ်မိတာပေါ့ ... "
မင်းသမီးများ ။ ။ " ချစ်မိတာပေါ့ .. ချစ်မိတာပေါ့ .."
မင်းသားတေဇ ။ ။ " အ၀ါရောင်မမ သိပ်လှနေတော့ ဒီက မင်းသား.. သား.. သား… "
Posted by nllamin.com at 10:57 PM
Time Waits for No Man သည် လူကိုအချိန်က မစောင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဥာဏ်ရှိသူအဖို့ အချိန်ကိုချုံ့၍ရကြောင်း ထင်ရှားစွာသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော
၀တ္ထုအတွက် ရွေ့လျားရန် လိမ့်သွားပွတ်မှုအား သုံးခြင်းသည် ရှေးကအချိန်ချုံ့ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ရှေးက တွေ့၇ှိခဲ့ပြီးသောရလဒ်များအတွက် ထပ်မံစမ်းသပ်ခြင်းမပြုဘဲ သင်ကြားခြင်းသည်..
ယခုခေတ်၏ အချိန်ချုံ့ခြင်း ဥပမာဖြစ်သည်။ အသက် 50 မှ ရမည့်အတွေ့အကြုံကို 40 အရွယ်တွင်ရ
အောင် မှတ်သား၊ ဖတ်ရှု၊ ဖလှယ်မျှော်တွေးခြင်းဖြင့် အချိန်ကို ချုံ့၍ရသည်။
ကျွန်တော်ဒီပို့စ်လေးကို forward mail တစ်ခုကနေရလို့ ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
စာဖတ်သူများလည်း ဒီထက်မက စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပါစေ။ စဉ်းစားစရာ မှတ်သားစရာလေးတွေမို့လို့ ပါ။
တစ်ခါတုန်းက အိမ်တစ်အိမ်မှာ အပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ခြံထဲမှာကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးရှိတယ် အကျယ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ၄၀ လက်မအမြင့်ကတော့ ၁၀ လက်မပေါ့။ ခြံကိုလာတဲ့သူအားလုံးကျောက်တုံးကြီးကို ခလုတ်တိုက်ကြတယ်။ သားက “ဖေဖေ အဲဒီ ကျောက်တုံးကြီးကို ဖယ်လိုက်ရအောင်လား
”ဖေဖေက “ကျောက်တုံးကြီးကိုလား အဖိုးခေတ်ကတည်းက ဒီမှာထားထားတာအဲလောက်ကြီးတာ ဘယ်အချိန်ထိတူးနေရအုန်းမလဲ လမ်းလျှောက်တာဂရုစိုက်လိုက်ရင်ပြီးရော မလား”
ဒီလိုနဲ့ သားက အဖေဖြစ်ချိန်ရောက်သွားတယ်။ကျောက်တုံးကြီးကတော့ နေရာဟောင်းမှာပဲ။ ချွေးမက ကြည့်လို့
Posted by nllamin.com at 8:51 PM
အုန်းဖျံ ဒုက္ခသည် စခန်းမီး လူလေးထောင်ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၆ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်၊ ဖုတ်ဖရာ့မြို့နယ်အတွင်း မြန်မာဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံနေထိုင်သော အုန်းဖျံ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရပ်ကွက် ၆ ခုကို ကြာသပတေးနေ့က နှစ်နာရီကျော်ကြာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးနောက် လူဦးရေ လေးထောင်ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားရသည်။
ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၆ ရပ်ကွက်ရှိသော အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲရှိ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်မှ မုန့်ကြော်နေသည့် မီးဖိုမှ တဆင့် မွန်းတည့်ချိန်မှ မွန်းလွဲ နှစ်နာရီခွဲချိန်ထိ အပြင်းအထန် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး စခန်းတွင်းရှိ ဇုန် A ရပ်ကွက် ၆၊ ၇ နှင့် ဇုန် B ရပ်ကွက် ၆၊ ၇၊ ၈ တို့မှ အိမ်ခြေ ၅၆၆ လုံး မီးထဲပါသွားပြီး လူဦးရေ ၄၄၁၀ ဦး အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု စခန်း ဥက္ကဋ္ဌ စောဝါးထီး က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Posted by nllamin.com at 7:05 PM
Honey ကို ကျုပ်မွေးတုန်းက နှစ်လသမီး..။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတာနဲ့
၀ယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ St.Bernard အမျိုးအစားခွေးမလေး..။ အုန်းခွံေ၇ာင်မှာ..
လည်ပတ် အဖြူဖောက်ပြီး အမွေးရှည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်..။ သမီး တစ်ယောက်လို
ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လို့ ပြောရင်လည်း ရမယ်ထင်တာပဲ..။ ခွေးကြီးမျိုးဆိုတော့
Honey တစ်နှစ်သမီးမှာ (မတ်တတ်) ရပ်ရင် လူတစ်ရပ်ကျော်အောင်ထိ ထွားလာခဲ့ပါတယ်..။
Posted by nllamin.com at 2:39 AM
မိုးဆိုရင် ရေပါမှ မိုးလို့ အဖေကပြောတယ်..။ ဖက်ဆွတ်မိုးလောက်ကို အဖေက
မိုးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး...။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အဖေက ဆုံးမဖူးတယ်..။
ဘာလုပ်လုပ်သူများနောက်ကတော့မလိုက်နဲ့တဲ့..။ (ရေ) ပါရမယ်ဆိုပါတော့..။
အဖေ့ခံယူချက်က မရွာချင်မရွာနဲ့..၊ ခြိမ်းနေတာလောက်နဲ့ သဘောမကျဘူး..၊
ဖွဲဖွဲလောက်နဲ့လည်းမကျေနပ်ဘူး..၊ လျှံချင်လျှံပလေ့စေ၊ သဲသဲမဲမဲရွာမှ မိုးလို့ခံယူတာ..။
ထက်မြတ်သူတွေနဲ့.. စွမ်း သူတွေရဲ့ ၀ိသေသကိုး..။
အဖေ့ဆုံးမစကားတွေက အဖေခိုင်းနှိုင်းခဲ့တဲ့ရေထဲ ပါသွားတယ်.
ကျွန်တော့်ဘ၀က ဘာမှဖြစ်မလာဘူး..၊ ဖက်ဆွတ်မိုးလို ဆွတ်ရုံမည်ကာ.
ကျွန်တော့်ဘ၀ အဖေ့အတွက် ဘာမှမပေးလိုက်ရသေးဘူး..။
Posted by nllamin.com at 12:22 AM
အုန်းဖျံ ဒုက္ခသည် စခန်းမီး လူလေးထောင်ကျော် အိုးအိမ်...